Gịnị bụ YouTube music na-eme ka YouTube dị ka gị Personal Music Isi Iyi
Gịnị bụ YouTube Music ma mee ka ọ dị ka Personal Music Isi Iyi
1. Gịnị bụ YouTube music
2. Gịnị ka anyị pụrụ ime na youtube music
3. TunesGo - YouTube dị ka onwe gị music isi iyi
1. Gịnị si YouTube music
YouTube Music bụ otu n'ime ndị kasị mma na ndị kasị elu ọrụ na e ẹkenam site Google na YouTube ọnụ. Ọ bụ a gụgharia ọrụ aha nke nwekwara e gbanwere YouTube Music isi. The ọrụ na nke a na-abụghị nanị ọkaibe ma ọrụ na-eme ka n'aka na mma atụmatụ na-enwe. The music isi nwekwara ike na-ahuta ka ihe ndị ọzọ ozi dị ka nke ugbu YouTube music ọrụ a na-agba ọsọ zuru fledge ebe ọ bụ na ụbọchị YouTube e n'elu site Google. Ndị kasị mma mma nke ọrụ bụ na ọrụ na-enwe ike ike, zọpụta na jikwaa listi ọkpụkpọ na ha onwe ha enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu.
YouTube Music aka music isi bụ a gụgharia ọrụ na e ẹkenam site Google na enyemaka ie YouTube. The ọrụ ahịa na-na-na-na-eme site na YouTube na maka otu ihe audio naanị nkwanye ọrụ bụ ihe ga-eme ka n'aka na ọrụ na-anọgide na aka nke ọrụ. Music isi nwekwara integrates ọrụ nke video gụgharia nke a na-kwadoro site video hosting ngalaba nke website. Ole na igba egbe e mere na November 2014 na zuru version ie Music Key Beta ga-abụ dị na 2015. E nwere ga-enweghị ọzọ na-eri nke ọrụ na ọrụ ga-agba ọsọ n'efu ruo niile na ẹdude debanyere aha dị ka mma.
Music playlist nwere ike na-ahuta ka online nzọpụta nke songs na ndị ọzọ na videos site ọrụ nke mere na ọkacha mmasị nwere ike anya na otu ebe kpam kpam. A na-azọpụta onye ọrụ si enyocha songs oge na ọzọ ma ọ bụghị naanị YouTube ma niile ma ama music ọrụ na-ahụ na nke a mma na-nyere. Mgbe ọ na-abịa YouTube mgbe ahụ, ọ dị ezigbo mkpa iburu n'obi na ọrụ bụ n'efu na dị nnọọ ole na ole clicks onye ọrụ bụ ike ịhazi music enweghị ihe ọ bụla nke na hassle.
3. YouTube music n'ọbá akwụkwọ
The music n'ọbá akwụkwọ ma ọ bụ ọdịyo n'ọbá akwụkwọ nke ọrụ nwere ike inweta na https://www.youtube.com/audiolibrary/ music nke na-eme n'aka na onye ọrụ nwere ike ịgbakwunye songs vidio a na-uploaded YouTube enweghị ihe ọ bụla hassle na jide n'aka na nwebisiinka nke mgbe chere ihu na nke a. Onye ọrụ nwere ike ibudata a niile tracks ma ọ bụrụ na ọ chọrọ na pụkwara ijide n'aka na tracks na-haziri offline. Ke adianade niile a ewu ewu na nke na usoro egwu niile na-depụtara e nke na-eme usoro n'ezie mfe nke mere na onye ọrụ naanị họrọ ndị nke ọ na-eche na a ga-mmasị site ọha na eze.
4. YouTube music ọkpụkpọ
YouTube na-aga n'ihu ịkọwa ọnụ ọgụgụ nke atụmatụ mgbe ọ na-abịa ọhụrụ Music Key inviter nanị ọrụ na-ga-ulo oru na 2015. The ọrụ ga-abịa na ngwa na ga-eme dị ka a video ọkpụkpọ maka mobile igwe na n'otu oge ọ ga- -emekwa ka n'aka na ndabere ebre na offline ọrụ na-nyere ka ọrụ na nke a. Ná mmalite a nde 30 song katalọgụ ga-atọhapụ nke ga-agụnye ma ọdịyo na video ọrụ na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ọrụ ga-abụ dị ole na ole nke mba nke ga--gbasaa n'ụwa nile na Itie oge. Nkịtị gụgharia ọkpụkpọ ọrụ ga-abụ n'efu ma ga-agbakwunyere na mgbasa ozi. Mgbe ọ na-abịa adịchaghị ọrụ mgbe ahụ, ọ bụ na--ahụ kwuru na ọrụ ga-ebubo na $ 10 / ọnwa.
Abbreviated dị ka YTMA award e nyere onye ọ bụla n'afọ na-asọpụrụ ndị kasị mma music video na a uploaded YouTube. The awards malitere n'afọ 2013 na kwa afọ minit 90 na-ekenyela n'ihi na nke a award na nke a ma ama artists ịrụ. The award e nyere na ndabere na mmetụta, echiche, na ndebanye aha na njikọ aka.
6. YouTube music nwebisiinka
Ọ nwekwara ike na-ahuta ka ọdịnaya ID usoro na-eme ka n'aka na ndị niile na vidiyo na-eji nwebisiinka music na-ẹdụk na na-ewepụ si YouTube. Ozugbo nke a hụrụ na mbụ Onye Okike ahụ dịkwa n'ebe ụmụ mmadụ niile ikike ka video na nwere ike igbochi ndị video si na-hụworo ma ọ bụ ogbi ọdịyo. Ọdịnaya nwekwara ike monetized.
E nwere ọtụtụ iri puku music Downloader na ahịa. Na-esonụ bụ njikọ nke Top 5 nke ha:
Gịnị ka anyị pụrụ ime na youtube music
1. Find ọkacha mmasị
Ndị na-esonụ bụ usoro na nke a:
m. The URL https://www.youtube.com/playlist?list=PLB90DC9FE5C3AE56B bụ ka a bịa na-esi na homepage:
ii. Onye ọrụ ahụ nwere iji jide n'aka na ihe ọ bụla nke song n'ime peeji na-egwuri na usoro-agwụ ebe a:
2. Listen online
Na-esonụ bụ usoro a ga-soro na nke a na-arụpụta ihe kasị mma:
m. Onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na URL nke isi na saịtị na ịchọgharịrị ie www.youtube.com "
ii. Onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na Keywords na-achọgharị na-arụpụta na-amịpụtara:
III. The chọrọ video nwere ike mgbe ahụ na-ele mfe:
Usoro dị mfe na-eso na ndị na-esonụ bụ zuru ezu otu na nke a:
m. Onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na URL https://www.youtube.com/playlist?list=PL63F0C78739B09958 bụ ka a bịa na:
ii. The videos nke music ga-egosipụta na onye ọ bụla n'ime nwere ike pịrị na-egwu ya mfe:
Nbudata nke vidio dị mfe. Usoro bụ a ga-agbaso a kọwara dị ka n'okpuru:
m. Isi website bụ a ga-emeghe:
ii. Onye ọrụ ahụ kwesịrị iji jide n'aka na mkpa Keywords na-etinyere otú ahụ results gbagote:
III. Mgbe chọrọ video na-egwuri URL bụ-depụtaghachiri na pasted na mmanya nke saịtị ọzọ nke bụ http://en.savefrom.net/ dị ka ọ bụ a YouTube Downloader:
Onye ọrụ ahụ kwesịrị ibudata chọrọ format ịrụcha usoro:
Na-ewu ewu music videos nwekwara ike ịchọgharịrị na usoro a ga-agbaso bụ dị ka ndị a:
m. The URL https://www.youtube.com/playlist?list=PLFgquLnL59alCl_2TQvOiD5Vgm1hCaGSI bụ na-ịchọgharịrị na-esi na chọrọ page:
ii. Ọ bụla nke video nwere ike pịrị na-egwu na music ahụ bụ ewu ewu na YouTube:
TunesGo - YouTube dị ka onwe gị music isi iyi
N'ihi na ma ama TunesGo usoro a ga-soro na-kọwara n'okpuru:
m. Mgbe usoro ihe omume ebudatara na arụnyere ụzọ a ga-agbaso bụ Discover> Online music. The YouTube na-ahụ ga-emeghe na nchọgharị na URL bụ-depụtaghachiri:
ii. The green igbe a na-ahụ na-eji na-eme ka n'aka na URL na-pasted:
III. The chọrọ format nwere ike mgbe ahụ ga-ahọrọ Ozugbo video weghaara site na URL na e pasted na ọ completes usoro na zuru.
> Resource> YouTube> Gịnị bụ YouTube Music na Mee YouTube dị ka Personal Music Isi Iyi